कंगनाले गरिन् ऋतिकको म्यानेजरलाई नियुक्त
Tue, Mar 19, 2019 | 13:51:29 NST
12:48 PM ( 1 year ago )
फागुन ६ – ऋतिक रोशन र कंगना रनावतबीच प्रेम भयो । विछोड पनि भयो । त्यस पछि दुबैले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा संचार माध्यममा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन कुनै मौका छोडेनन् । कंगनाले आफुलाई झुटो आरोप लगाएको भन्दै ऋतिक अदालतसम्मै पुगे । कंगनाले पनि हरेक अन्तरवार्तामा ऋतिकले आफुलाई धोका दिएको भन्दै ऋतिकको बेइजत गर्न कुनै मौका छोडिनन् । कंगनाले आफ्नो मनमा ऋतिक प्रतिको वितृष्णा मज्जासँगै सञ्चार माध्यममार्फत निकालि दिइन् ।
ऋतिक र कंगनाको झगडा यति विवादित थियो कि जसका कारण बलिउड फिल्म उद्योग, संचार माध्यम तथा यि दुबैका समर्थकहरुबीच हलचल नै मच्चिएको थियो । तर केही समय दुबै शान्त भएका थिए । यसैबीच फेरी कंगनाले गरेको कामले बलिउडमा दुबैको चर्चा हुन थालेको छ ।
कंगनाले ऋतिककी पूर्व म्यानेजर अञ्जली आथालाई आफ्नो म्यानेजरको रुपमा नियुक्त गरेकी छिन् । ऋतिकले बलिउडमा करियर सुरु गर्दा उनै अञ्जलीलाई म्यानेजर राखेका थिए । वर्षौँसम्म सँगै काम गरेपछि म्यानेजर अञ्जलीले राम्रो काम नगरेको भन्दै ऋतिकले सम्झौता समाप्त गरेका थिए ।
अहिले कंगनाले पूर्वप्रेमी ऋतिककै म्यानेजर अञ्जलीलाई नियूक्त गरेपछि अञ्जलीले ऋतिक र कंगनाबीचको सम्बन्धलाई कसरी सम्हाल्ने छिन् ? कंगना र ऋतिकबीचको झगडाले कुन रुप लिने हो ? भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।